Jery ​​horonan-tsary momba ny LG G Flex 2 | Androidsis
Tamin'ny fanontana farany an'ny CES any Las Vegas, LG dia nanolotra ny LG G Flex 2, Mpikambana farany ao amin'ny fianakaviana curvy an'ny mpamokatra Koreana ary izay nambara ho iray amin'ireo terminal mahaliana indrindra amin'ny foara ara-teknolojia.
LG dia nanararaotra ny andiany farany an'ny Mobile World Congress mba hitondrana ilay mpikambana vaovao ao amin'ny faritra Flex, noho izany dia nanararaotra izahay jereo ny LG G Flex 2, terminal misy famolavolana tokana sy mamaky tany. Tsy hahomby amin'ny fanadihadianay ve ianao?
Sarimihetsika kely kokoa sy tsara kalitao
Raha diso ny G Flex dia haben'ny efijery io. 6 santimetatra dia toa lehibe loatra ary raha ampiantsika ny vahaolana 720p amin'izany dia manana cocktail izay tsy nahavita famolavolana. Toa efa nianatra ny lesona azony i LG. Ary ny LG G Flex 2 manambatra a Tontonana plastika Oled misy 5.5-inch izay mahatratra ny famahana ny HD.
Asongadino ny fiarovana Gorilla Glass 4 nohatsarain'ny Samsung mba hahafahany mampiasa azy amin'ny efijery miolaka. Tsara homarihina fa ity curvature ity dia tsy vitan'ny hoe manana endrika endrika mangatsiaka kokoa, fa koa manolotra fangejana mahazo aina kokoa, Ankoatry ny fanoherana ny tsindry ka, raha sendra mipetaka miaraka amin'ny telefaona ao am-paosinao ianao dia hihazona izany nefa tsy hamaky ny efijery.
ny toetra ara-teknikan'ny LG G flex 2Araka ny hitanao amin'ny horonantsary dia mampiseho fantsona tena matanjaka izy ireo, noho ny Qualcomm Snapdragon 810 SoC. Na dia tsy afaka nanadinika tsara ilay fitaovana aza izahay tamin'ny fotoana rehetra dia tsikaritray fa be loatra ilay izy. Na dia tsy maintsy miandry ny singa voalohany hitsena ny tsena aza isika hahalalany raha tena hafanana be tokoa ilay mpanodina kintana Qualcomm.
Ahoana ny hevitrao momba ny LG G Flex 2?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » LG » MWC 2015: fijerena horonantsary ny LG G Flex 2, ny terminal miolakolaka an'ny LG